Khasaaraha macaamiisha TV-ga 2020 ee TV-gu wuxuu ka duwaan karayey isku darka dadka Chicago iyo Houston - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA »Khasaaraha Khadka Telefishinka ee 2020 Cable TV wuxuu dhaafi karaa marka la isu geeyo Chicago iyo Houston Dadka - BGR
Cutubkan cusub ee taxanaha Streaming Wars oo aan ku jirno horumar, Netflix waxay sii wadaa burburinteeda iyo jumlado cusub oo ka socda Disney, shirkadda waalidka ee HBO, iyo kuwa kale, mid ka mid ah waxyaabaha aad waxbadan ka maqasho waa in xishoodka hodanka ah ee qulqulka qulqulka ay dhammaan ilahaani soo bandhigaan uu ka dhigayo daawadaha guuleystaha. Macaamiishaas ayaa ah kuwa ugu wanaagsan dhamaadka, sababtoo ah waxaan ku leenahay xulashooyin badan xulashooyinkayaga - gaar ahaan maadaama tartamadaan oo dhan ay tahay inay aragti ahaan u oggolaadaan kuwa ololeeya inay kordhiyaan ciyaartoooda, iyagoo garanaya waxay wajahayaan.
Laakiin haddii anaga, macaamiisha ah, aan natiijooyinka ugu wanaagsan ka helno seenyadan, bal ka waran dhamaadka kale ee heerka? Kumaa ku jira booska ugu habboon uguna daran meesha ugu mudan? Jawaabtaan, waxaan u jeesanaynaa warbixin falanqeeye cusub kaas oo rinjiyeeya sawir masiibo ah oo ku saabsan xaaladda bixiyayaasha telefishanka fiilooyinka ee 2020.
Isku soo wada duuboo, waxaan si qurux badan ugu adag nahay shirkadda Big Cable, waana sabab wanaagsan . Inta badan dadka oo aan dadaal badan ku bixin waxay soo sheegi karaan sheekooyinka naxdinta leh ee la xiriira arrimaha biilasha, arrimaha adeegga macaamiisha, dacwadaha qarsoon, iyo inbadan. Daraasadda Wararka Consumer taas oo aan tixraacnay bishii hore waa mid ka mid ah xaaladaha ugu foosha xun, marka loo eego taas, ka dib markaan tixgelinno dhowr boqol oo biilal fiilooyin ah oo bixiyayaasha telefishanka waaweyn ee 13, 25% waxay ka kooban yihiin lacag-bixinno aan ujeeddo kale lahayn si loo yareeyo daqliga dheeriga ah ee shirkadaha fiilooyinka.
Ka dib luminta ku dhawaad ​​2 milyan ee isugeynta macaamiisha ee rubucii hore, Comcast, Verizon, Spectrum iyo AT & T ayaa saadaaliyay in kaliya maahan khasaaraha sii kordhaya 2020. Waxay sidoo kale saadaalinayaan in dhiig-baxa uu saameyn ku yeelan doono macaamiisha 6,2 milyan, marka la eego tirada dadka goynta xadhkaha una beddelaya qulqulka 2020. Sida uu sheegayo falanqeeyaha UBS John Hodulik, waxaa soo xigtay Cord Cutters News "Waxaan hadda rajeyneynaa in khasaaraha wershaduhu ku sii jiri doonaan inta u dhexeysa 6 illaa 7% sanadkiiba muddada dhexdhexaadka ah, taas oo soo jeedineysa isbeddello hoos udhaca ku yimid kaabayaasha guud ee qaranka sanadka soo socda."
Si tan loo dhigo, inka badan 6 milyan oo ka mid ah macaamiisha ayaa macnaheedu yahay koox ka weyn dadka marka loo eego isku darka magaalooyinka Chicago iyo Houston (oo ku saleysan qiyaasaha dadka 2018). Mar labaad, tani waa isbeddel aan ku adkaaneyn in la fahmo, gaar ahaan macaamiisha waxay sii kordhayaan raadinta xulashooyinka qulqulka cusub sida Apple TV + iyo Disney + si ay u dhammaystiraan diiwaangelinta hadda jirta ee Netflix, taasoo iga dhaafi karta aniga oo la yaaban sababta aan ugu baahan ahay telefishanka fiilada.
Source source: imageBROKER / Shutterstock
Steve Wozniak wuxuu ku biirayaa dhaleeceeyayaasha u maleynaya in kaarka algorithm-ka Apple inuu lahaan karo cillad weyn - galmada - BGR